ကလေး ကျန်းမာရေး – My Doctor
You are here:Home-All Articles-မိခင်နှင့်ကလေး ကျန်းမာရေး-ကလေး ကျန်းမာရေး
Things to do about Diaper Rash
By tayzar|2019-09-27T13:34:44+00:00September 27th, 2019|Categories: All Articles, ကလေး ကျန်းမာရေး, မိခင်နှင့်ကလေး ကျန်းမာရေး|
?ဒိုင်ပါလောင်တဲ့အခါ မဖြစ်မနေလုပ်ရမည့်အချက်များ? ကလေးသေးခံ ဒိုင်ပါနဲ့ ထားလေ့ရှိတဲ့ ကလေးတွေမှာ ဒိုင်ပါလောင်တဲ့ ပြဿနာက ဖြစ်လေ့ရှိတဲ့ ပြဿနာပါ။ ဒီတော့ ဒိုင်ပါလောင်ရင် အမြန်သက်သာပျောက်ကင်းဖို့ ဒီအချက်လေးတွေကို သတိထား လိုက်နာဖို့လိုပါတယ်။ ✔ဒိုင်ပါ မကြာခဏလဲပေးပါ။ ဒိုင်ပါ သိပ်မစိုစွတ်ခင် ကြိုလဲပေးခြင်းက အနာကို မြန်မြန်ခြောက်သွေ့ အနာကျက်မြန်စေပါတယ်။ တစ်နာရီတစ်ခါ ဒိုင်ပါကို စစ်ပါ။ ဆီး/ဝမ်း စိုနေရင် ချက်ချင်းလဲပါ။ စိုစွတ်မှုကို စုပ်ယူနိုင်စွမ်းပိုကောင်းတဲ့အတွက် ဒီအခြေအနေမှာ တစ်ခါသုံးဒိုင်ပါတွေက ပိုသင့်တော်ပါတယ်။ ✔ကလေးရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်အောက်ပိုင်းကို လေဝင်လေထွက်ကောင်းအောင် လုပ်ပေးပါ။ ဒိုင်ပါလဲပေးချိန်တိုင်း ချက်ချင်းပြန်မဝတ်ဘဲ ခါးအောက်ပိုင်းဗလာကျင်းပြီး ခဏထားပေးပါ။ ကြာကြာထားလေ အနာမြန်မြန်ခြောက်သွေ့သက်သာလေ ဖြစ်ပါတယ်။ အအေးမမိစေဖို့တော့ ဂရုစိုက်ပါ။
Comments Off on Things to do about Diaper Rash
How to know your baby’s nervous is weakness
By tayzar|2019-09-03T14:56:03+00:00September 3rd, 2019|Categories: All Articles, ကလေး ကျန်းမာရေး, မိခင်နှင့်ကလေး ကျန်းမာရေး|
သင့်ကလေး အာရုံကြောအားနည်းနေမှန်း ဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ အမြဲလက်လက်ထအောင်ဆော့နေတဲ့..ဆော့ဖို့လည်း လိုအပ်တဲ့ ကလေးတွေအတွက် အာရုံကြောတွေ အမြဲအားကောင်းနေဖို့လိုပါတယ်။ အာရုံကြော အားနည်း၊ထိခိုက်၊ ပျက်စီးစေနိုင်တဲ့ အကြောင်းရင်းတွေလည်း အများကြီးရှိပါတယ်။မွေးရာပါ ခန္ဓာကိုယ်ပြဿနာတစ်ခုခုကြောင့်ဖြစ်နိုင်သလို အာဟာရချို့တဲ့လို့၊ ဒါမှမဟုတ် မတော်တဆမှုတွေကြောင့်လည်း ဖြစ်တတ်ပါတယ်။အဆက်မပြတ်ထပ်ခါထပ်ခါလုပ်ဆောင်နေရတဲ့ လှုပ်ရှားမှုတွေကြောင့်လည်း ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဒီလက္ခဏာမျိုးတွေ ပေါ်လာရင်တော့ ကလေးမှာ အာရုံကြောပြဿနာတစ်ခုခုရှိနေပြီလို့ ယူဆရနိုင်ပါတယ်။ ?ထုံခြင်း ခြေတွေ လက်တွေပဲ ထုံနိုင်သလို တချို့နေရာတစ်ခုတည်းမှာပဲ ကွက်ပြီးထုံနေတာမျိုးလည်း ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ခြေအိတ်လက်အိတ်စွတ်ထားသလိုမျိုး ခြေထိပ် လက်ထိပ်တွေ ထုံတယ် ထိလို့ထိမှန်းမသိဖြစ်ဖြစ်နေပြီ ဆိုရင်တော့ အာရုံကြောပြဿနာ သိသိသာသာ ဖြစ်နေပြီလို့ ပြောလို့ရပါတယ်။ ?ကျဉ်ခြင်း အချိန်ကြာကြာ ဖိမိထားလို့ ကျဉ်တာမျိုးမဟုတ်ဘဲ မကြာခဏ ကျဉ် နေတတ်တာမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်။များသောအားဖြင့်
Facts of your baby’s nervous to be strong
By tayzar|2019-09-01T23:18:57+00:00September 1st, 2019|Categories: All Articles, ကလေး ကျန်းမာရေး, မိခင်နှင့်ကလေး ကျန်းမာရေး|
သင့်ကလေး အာရုံကြောအားကောင်းစေဖို့ နည်းလမ်းကောင်းများ ကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ လိုအင်တွေက သိပ်မများလှပေမဲ့ လူကြီးတွေဖြည့်ဆည်းပေးရမဲ့ လိုအပ်ချက်တွေကတော့ များလှပါတယ်။နံပါတ်တစ်လိုအပ်ချက်ကတော့ ကျန်းမာရေးပါ။ကျန်းမာရေးအတွက် လိုက်နာရမဲ့ လိုအပ်ချက်တွေအများကြီးထဲက ဦးနှောက်နဲ့ အာရုံကြောတွေရဲ့ ကျန်းမာရေးအတွက် ဘာတွေလုပ်ပေးရမလဲ မေးရင်တော့ ဒီလိုဖြေရပါလိမ့်မယ်။ ?ကစားပါ အသက်အရွယ်ပေါ်မူတည်ပြီး အန္တရာယ်မဖြစ်နိုင်သည့် ကစားနည်းတိုင်းကို ကလေးကို ပေးဆော့ပါ။ရေကူး၊ စက်ဘီးစီး၊ ဘောလုံးကန် စတဲ့ သွက်လက်တက်ကြွစွာ ဆော့ကစားရတဲ့ ကစားနည်းတစ်ခုခုကို ပုံမှန်ကစားခိုင်းဖို့လိုအပ်သလို Chess၊ ကျားထိုး၊ Scrabble၊ စတဲ့ ဦးနှောက်စွမ်းရည်တိုးတက်စေမဲ့ အငြိမ် ကစားနည်းတွေလည်း ပေးဆော့ပါ။ ?ဖုန်း/TV/ဂိမ်း လျှော့ပါ ဒီနေ့ခေတ်ရဲ့ အကြီးဆုံးပြဿနာပါ။ဖုန်း၊TV နဲ့ အချိန်ကုန်နေတဲ့ ကလေးတွေမှာ ဖန်တီးနိုင်စွမ်းရည်ကျလာတာ၊ အညောင်းမိပြီး
Things of Diaper Rash
By tayzar|2019-08-23T15:19:53+00:00August 23rd, 2019|Categories: All Articles, ကလေး ကျန်းမာရေး, မိခင်နှင့်ကလေး ကျန်းမာရေး|
ဒိုင်ပါလောင်ရသည့် အကြောင်းရင်းများ ဒီခေတ်မှာတော့ သေးခံဒိုင်ပါနဲ့ ကင်းတဲ့ ကလေးဆိုတာ ခပ်ရှားရှား။ ဒိုင်ပါကြောင့် မိဘတွေအတွက် လျှော်ရဖွတ်ရ အတော်သက်သာသွားပေမဲ့ သတိမထားဘဲ ပေါ့ပေါ့ဆဆသုံးမိရင်တော့ ကလေးတွေအတွက် ဒိုင်ပါလောင် အနာဖြစ် ပိုးဝင်တဲ့ အန္တရာယ်ရှိတာမို့ သတိထားဖို့ လိုပါတယ်။ ?ဘာကြောင့် ဒိုင်ပါလောင်ကြလဲ ?? ▪ အဓိက အကြောင်းရင်းကတော့ ဒိုင်ပါတစ်ခုရဲ့ ခံနိုင်ရည် အတိုင်းအတာကျော်ပြီး အချိန်ကြာကြာဝတ်ထားမိရင် ဖြစ်ပါတယ်။ ▪ ဒိုင်ပါကို ကြာကြာဝတ်ထားမိတဲ့ အခါ အချိန်ကြာမြင့်စွာစိုစွတ်မှု၊ ပွတ်တိုက်မှုနဲ့ ဆီးကနေထွက်လာတဲ့ အမိုးနီးယားဓာတ်တွေက ကလေးရဲ့ နုနယ်လှတဲ့ အသားအရေကို ပျက်စီးထိခိုက်စေပါတယ်။ နေရခက်ယားယံခြင်းကနေ နောက်ဆက်တွဲ ဒိုင်ပါလောင်တယ်ဆိုတဲ့ အဆင့်အထိ ဂရုမစိုက်မိရင်
By tayzar|2019-07-03T14:52:07+00:00July 3rd, 2019|Categories: All Articles, ကလေး ကျန်းမာရေး, မိခင်နှင့်ကလေး ကျန်းမာရေး|
ဆီးခံဝမ်းခံလောင်ကွက် မဖြစ်အောင်ဘယ်လိုကာကွယ်ကြမလဲ မေမေဖေဖေတို့ကြုံတွေ့နေကျဖြစ်တဲ့ သားသားမီးမီးလေးတွေမှာဖြစ်သော ဆီးဝမ်းခံ(Diaper)ကြောင့်ဖြစ်လေ့ရှိတဲ့ အရေပြားလောင်ခြင်းကို မည်သို့မည်ပုံကာကွယ်ကြမလဲဆိုတာလေးကိုပြောကြရအောင်။ ကာကွယ်နည်းမပြောခင်မှာ Diaper rash ဆိုတာဘာလဲဆိုတဲ့အကြောင်း အရင်ပြောပြချင်ပါတယ်။ Diaper rash ဆိုတာ ဘာလဲ??? Diaper rash ဆိုတာဟာ ဆီးဝမ်းခံ(Diaper)ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ အရေပြားလောင်ခြင်း(ဝါ)အရေပြားရောင်ယမ်းခြင်းတစ်မျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်းဟာ Diaper စိုစွတ်ခြင်း၊လဲမပေးပဲကြာရှည်စွာဝတ်ဆင်ထားခြင်း၊အရေပြားနှင့်ဓါတ်မတည့်ခြင်း၊ပွန်းပဲ့ခြင်းတို့ကြောင့်ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ကလေးတွင်သာမက လူကြီးတွေမှာလဲဖြစ်တတ်ပါတယ်။ Diaper rash ဟာကလေးကိုအလွန်နေရထိုင်ရခက်စေတာကြောင့် မဖြစ်အောင်ကြိုတင်ကာကွယ်ထားသင့်ပါတယ်။ Diaper rash မဖြစ်အောင် ဘယ်လိုကာကွယ်ကြမလဲ??? အောက်မှာဖော်ပြထားတဲ့အချက်လေး(၇)ချက်ကို လိုက်နာလုပ်ဆောင်ပြီးကာကွယ်နိုင်ပါတယ်- ၁။Diaper မကြာခနလဲပေးပါ။ ညစ်ပတ်ပေရေ(သို့)စိုစွတ်တာနဲ့ လဲပေးပါ။ ၂။Diaper လဲပြီးတိုင်း ရေနွေးနွေးလေးဖြင့် ညင်သာစွာကလေးအောက်ပိုင်းကို သန့်ရှင်းရေးလုပ်ပေးပါ။ နူးညံ့စိုစွတ်သောအဝတ်၊ဂွမ်းလုံးသန့်လေးတွေနဲ့ ညင်ညင်သာသာလေးသန့်ရှင်းပေးပါ။ အရက်ပြန်ပါသောသန့်ရှင်းရေးပစ္စည်းများမသုံးသင့်ပါ။
By tayzar|2019-06-29T10:34:52+00:00June 29th, 2019|Categories: All Articles, ကလေး ကျန်းမာရေး, မိခင်နှင့်ကလေး ကျန်းမာရေး|
မေမေတို့ရေ အရင်အပတ်က ကလေးများအတွက် ဆိတ်နို့ကုရဲ့ အကျိုးကျေးဇူးလေးတွေကို ပြောပြပေးထားပါတယ်။ ကလေးတွေအတွက် ဘာကြောင့် သင့်တော်တာလဲဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကို ပြောပြပေးထားတယ်နော်။ အာဟာရဓာတ်တွေနဲ့ ပြည့်စုံရုံသာမက ပြီး ကောင်းကျိုးများပြီးးတဲ့ ကလေးတွေအတွက်အသင့်တော်ဆုံး အထူးထုတ်လုပ်ဖော်စပ်ထားတဲ့ ဆိတ်နို့မှုန့်ကတော့ DG3ဆိတ်နို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ DG3ဆိတ်နို့မှုန့်ကို (၃)နှစ်နှင့်အထက် ကလေးတွေသောက်လို့ရပါတယ်။ ကလေးတွေရဲ့ ဦးနှောက်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးထွားဖွံ့ဖြိုးမှုအတွက် လိုအပ်တဲ့ အဓိကအာဟာရဓာတ်တွေကို လွယ်ကူစွာ ချေဖျက်စုပ်ယူနိုင်တဲ့ DG3ဆိတ်နို့မှုန့်ရဲ့ အကျိုးကျေးဇူးလေးတွေအကြောင်း ပြောပြချင်ပါတယ်။ ၁.နို့ရည်ထုတ်စနစ်ရဲ့ အကျိုးကျေးဇူးများ ဆိတ်တွေရဲ့ နို့ရည်ထုတ်တဲ့ပုံစံက နွားများထက် လူတွေရဲ့ နို့ရည်ထုတ်တဲ့ပုံစံနဲ့ ဆင်တူတာကြောင့် ဆိတ်နို့မှာ
By tayzar|2019-06-26T20:30:22+00:00June 26th, 2019|Categories: All Articles, ကလေး ကျန်းမာရေး, မိခင်နှင့်ကလေး ကျန်းမာရေး|
?သံဓာတ်က ကလေးတွေအတွက် ဘယ်လောက်အရေးပါလဲ? ကလေးတွေမှာ ဘာလို့ သံဓာတ်ပိုလိုအပ်တာလဲ? သံဓာတ်ပြည့်ဝရင် Iron Man ကြီးဖြစ်သွားမှာမို့လား။ အဲ့လိုတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ သဘာဝလွန်စွမ်းအားရှင်ကြီး ဖြစ်မှာတော့ မဟုတ်ပေမဲ့ ဘဝလမ်းခရီးကို ကိုယ်စွမ်းဥာဏ်စွမ်းအပြည့်နဲ့ လျှောက်လှမ်းသွားနိုင်ဖို့တော့ သံဓာတ်အားနည်းနေလို့မဖြစ်ပါဘူး။ ကလေးတွေရဲ့ ပြည့်ဝတဲ့ ဖွံ့ဖြိုးမှုအတွက် သံဓာတ်လိုအပ်သလို ကိုယ်ခံစွမ်းအားအမြဲပြည့်ဝနေဖို့လည်း သံဓာတ်ပြည့်ဝဖို့လိုပါတယ်။ ?သံဓာတ်ဆိုတာဘာလဲ၊ ဘယ်ကရလဲ ?? Iron လို့ခေါ်တဲ့ သံဓာတ်ဆိုတာ လူ၊ သစ်ပင်၊ တိရစ္ဆာန် စတဲ့ သက်ရှိတွေအတွက် မရှိမဖြစ် ပါဝင်တဲ့ သတ္ထုဓာတ်တစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ သဘာဝအားဖြင့် - အသည်း၊ အသား၊ ငါး၊ ပုဇွန် အမျိုးမျိုး - ပဲအမျိုးမျိုး၊
By tayzar|2019-06-22T20:37:44+00:00June 22nd, 2019|Categories: All Articles, ကလေး ကျန်းမာရေး, စားသောက်မှုပုံစံ, မိခင်နှင့်ကလေး ကျန်းမာရေး, အလှအပနှင့်နေထိုင်စားသောက်မှုပုံစံ|
ကလေးများအတွက် ဆိတ်နို့၏ ပိုမိုကောင်းမွန်သော အကျိုးကျေးဇူး ၃ ချက် နို့ သောက်ပါလို့ပြောလိုက်ရင် တော်တော်များများက နွားနို့ကိုပဲ အလွယ်တကူ သတိရတက်ကြတယ်။ လွယ်လွယ်ကူကူ ပေါပေါများများလည်း ဝယ်လို့ရနိုင်တာကို… ဆိတ်နို့က နွားနို့ထက် ပိုပြီးအာဟာရဓာတ်တွေ ပါဝင်တယ်ဆိုတာ လက်ခံထားကြပေမယ့် လက်ဆတ်တဲ့ ဆ်ိတ်နို့ကို လွယ်လွယ်ကူကူ ရနိုင်ဖို့က မလွယ်လှပါဘူး… တကယ်လည်း ဆိတ်နို့မှာ နွားနို့ထက် ပိုမိုပြည့်စုံတဲ့ အာဟာရဓာတ်တွေ ပါဝင်ပါတယ်။ ဆိတ်နို့ရဲ့ နွားနို့ထက် ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့ အကျိုးကျေးဇူးတွေအများကြီးထဲကမှ ကလေးတွေအတွက် အဓိက အကျိုးကျေးဇူး ၃ ချက်အကြောင်း ပြောပြချင်ပါတယ်။ ၁ ။ လွယ်ကူစွာ အစာချေဖျက်နိုင်ခြင်း ဆိတ်နို့နဲ့ နွားနို့ရဲ့ အဆီပါဝင်မှုခြင်းတူပေမယ့်
Your Children Lunch Box
By tayzar|2019-06-02T19:04:49+00:00June 2nd, 2019|Categories: All Articles, ကလေး ကျန်းမာရေး, မိခင်နှင့်ကလေး ကျန်းမာရေး|
သင့်ကလေးငယ် ကျောင်းသွားတဲ့အခါ ထမင်းဘူးနဲ့အတူဘာစားစရာတွေထည့်ပေးကြမလဲ? အခုဆိုရင် နွေဥတုအကုန်မို့ မိုးတွင်းကိုကူးပြီဆိုတဲ့အခါ ကျောင်းဖွင့်ရာသီကိုရောက်ရှိလာတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့ကြောင့်မေမေတို့အနေနဲ့ သားသားမီးမီးတို့ကို နေ့ခင်းဘက်ကိုအိမ်မှာပဲ ထမင်းဟင်းနဲ့ မုန့်ပဲသွားရည်စာတွေကျွေးနေရင်းကနေ ထမင်းဘူးနဲ့ မုန့်ဘူးထည့်ပေးရတော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက် သားသားမီးမီးတို့အတွက် သင့်တော်ရာ နေ့ခင်းနေ့လည်သွားရည်စာတွေကိုရွေးချယ်တင်ပြပေးလိုက်ရပါတယ်။ ထမင်းဘူးဘေးက မုန့်ဘူးလေး ဘာတွေရွေးပြီးထည့်ကြမလဲ? လတ်ဆတ်သောအသီးအနှံများ ရာသီအလိုက် စတော်ဘယ်ရီ၊ လိမ္မော်သီး၊ စပျစ်သီး၊ ငှက်ပျောသီး အစရှိတဲ့ အသီးအနှံလတ်လတ်ဆတ်ဆတ်တွေဟာ ဗီတာမင်များစွာပါဝင်တဲ့အတွက် ကလေးငယ်ကိုကိုယ်ခံအားတက်စေပါတယ်။ မြန်မာ့ရိုးရာမုန့်များ သန့်ရှင်းစွာပြုလုပ်ထားတဲ့မြန်မာမုန့်တွေဟာ အရသာလဲရှိ အားအင်လည်းဖြစ်စေတာမို့ ကလေးငယ်တွေအတွက်သင့်တော်တဲ့ သွားရည်စာတစ်မျိုးတစ်ဖုံအနေနဲ့ ထည့်သွင်းထားပါတယ်။ နွားနို့၊ ပဲနို့ နှင့် ဒိန်ချဉ် နို့နှင့် နို့ထွက်ပစ္စည်းတွေဟာ ကယ်လစီယမ်ဓာတ်ကြွယ်ဝတဲ့အတွက်ကြောင့် ကလေးတွေရဲ့အရိုးကိုသန်မာစေပြီး အရပ်ရှည်မှုကိုအားပေးပါတယ်။ ပေါင်မုန့်၊ ဆင်းဒဝစ်၊ နှင့်
How to wear clothes in Summer
By tayzar|2019-04-02T11:06:19+00:00April 2nd, 2019|Categories: All Articles, ကလေး ကျန်းမာရေး, မိခင်နှင့်ကလေး ကျန်းမာရေး|
" ပူပြင်းတဲ့နွေရာသီမှာ ကလေးငယ်တွေအတွက် ဝတ်စားဆင်ယင်မှုနဲ့နေထိုင်မှုပုံစံအကြံပြုချက်များ " ဘယ်လိုမျိုးလေးတွေ ဝတ်ပေးသင့်သလဲ? ကလေးငယ်သက်တောင့်သက်သာရှိစေမယ့် ချည်သားပါးပါးလေးတွေဟာ အသင့်တော်ဆုံးပါ။ပတ်ဝန်းကျင်အပူချိန်နဲ့လိုက်လျောညီထွေရှိမယ့် အဝတ်အစားမျိုးတွေဝတ်ဆင်ပေးရပါမယ်။အရောင်ဖျော့ဖျော့လေးတွေဟာ နွေရာသီမှာဝတ်ဆင်သင့်တဲ့အရောင်လေးတွေပါ။ဒါပေမယ့် ပတ်ဝန်းကျင်အပူချိန်ကိုလည်း ဂရုစိုက်ပါ။နေပူထဲထွက်ချိန်ဝတ်ထားတဲ့အဝတ်အစားနဲ့ Air con ခန်းထဲဝင်မယ်ဆိုရင်တော့ ကလေးငယ်ရဲ့အပူချိန်ကို မကြာမကြာစမ်းသပ်ပြီး လိုအပ်ရင်အကျီင်္ထပ်ဝတ်ပေးဖို့လိုပါလိမ့်မယ်။ လေဝင်လေထွက်ကောင်းအောင်ဂရုစိုက်ပါ။ ပြတင်းပေါက်တွေဖွင့်ထားပါ။နေရောင်သိပ်ရှိန်လွန်းတဲ့အခါမျိုးမှာ နေရောင်ကိုလိုက်ကာစတာမျိုးနဲ့ကာထားပြီး လျှပ်စစ်ပန်ကာရဲ့အကူအညီကိုယူနိုင်ပါတယ်။လေအေးအေးလေးဖြစ်အောင်ပန်ကာရဲ့ရှေ့မှာ ရေအေးဇလုံတစ်ခုကိုထားနိုင်ပါတယ်။ အိပ်ရာခင်းကလည်း အရေးကြီးပါတယ်။ ပိုးသား ဖဲသားအိပ်ရာခင်းလှလှတွေကိုမေ့လိုက်ပါ။ ချည်သားအိပ်ရာခင်းလေးတွေကအကောင်းဆုံးပါ။ ရေချိုးပေးပါ။ ကလေးငယ်ကို တစ်နေ့ကိုရေအေးအေးလေးနဲ့ ၂ ကြိမ်အနည်းဆုံးချိုးပေးသင့်ပါတယ်။ ရေခဲတုံးလေးတစ်တုံးကလည်း အထောက်အကူပြုစေပါတယ်။ ကလေးငယ်အိပ်တဲ့အခန်းမှာ ရေခဲတုံးကြီးကြီးတစ်တုံးကို ဇလုံထဲထည့်ထားပေးရင် လေထုကအေးမြနေမှာပါ။ ကလေးကိုဂျီမကျအောင်ထားပါ။ ကလေးငယ်စိတ်မကြည်ဘဲ ဂျီကျနေရင် ခန္ဓာကိုယ်အပူချိန်တက်လာတဲ့အတွက် ဂျီမကျအောင်ထားသင့်ပါတယ်။ အခန်းထဲမှာ သာမိုမီတာတစ်ချောင်းဆောင်ထားပါ။